Advantage Company - Juancheng Tianma Rubber & caaga Co., Ltd.
Juancheng Tianma Rubber & caaga Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa Juancheng County, Gobolka Shandong. Waxaan nahay soo saaraha ah xirfadeed ee tuubooyinka caag la baaxadda ah wax soo saarka ballaaran. Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 2006 iyadoo magaalada ka diiwaan gashan ee RMB 12 million.
Sannadkii 2008, waxaan helay shahaadada caadiga ah ammaanka.
Sanadkii 2010, shirkadda ka diiwaan gashan "CHENWANG" summad
In2014, baxno nidaamka maaraynta tayada ISO9001 caalamiga ah: 2008.
Ka dib markii in ka badan toban sano horumarka joogta ah, shirkadda hadda daboolayaa meel ka mid ah 40,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo uu leeyahay 15,000 oo mitir oo laba jibbaaran workshop caadiga ah. gebi Waxaa jira 100 shaqaalaha iyo in ka badan 10 injineerada, oo ay ku jiraan 5 injineerada sare. Shirkadda ayaa ciidamo xoog leh farsamo, qalab tooling fiican, complete qalabka baaritaanka, technology-soo-saarka sare iyo habka maareynta tayo kaamil ah. Our awoodda wax soo saarka sanadeedku waa 6million mitir tayada xasilloon oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaan leenahay badan oo kala duwan iyo tilmaamo dhamaystiran oo alaabta. badeecada kala qaybsan yihiin saddex taxane: silig tuubada caag aarayo, tuubo caag silig tidcan iyo dhar tuubada caag tidcan, kuwaas oo loo soo saaray si waafaqsan Heerka SAE, waxyaabaha caadiga ah din iyo GB standard.The hubkaas ayaa loo isticmaalaa in mashiinada injineernimada gudaha, gaadiidka koronto , bir iyo bir dikhaw, macdanta dhuxusha, dhismaha, warshadaha, shidaalka, difaaca dabka iyo beeraha kale. Isla mar ahaantaana, alaabta waxaa lagu dhoofiyo Maraykanka, Yurub, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Eeshiya iyo dalalka kale iyo gobolada, iyo si fiican u helay by users gudaha iyo dibadda.